ရေကြောင်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရေကြောင်းတိုင်းတာရေးအမြန်ရေယာဉ်သုံးစင်း ၀? - Yangon Media Group
ရေကြောင်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရေကြောင်းတိုင်းတာရေးအမြန်ရေယာဉ်သုံးစင်း ၀?
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄- မန္တလေး-ညောင်ဦး ရေလမ်းဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်စေရေးစီမံကိန်းတွင် ရေ ကြောင်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းနှစ်သောင်း ကျော်တန်ဖိုးရှိ ရေကြောင်းတိုင်း တာရေးအမြန်ရေယာဉ် သုံးစင်းကို ၀ယ်ယူခဲ့ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရ သည်။ ယင်းအမြန်ရေယာဉ်များဖြင့် မန္တလေးနှင့်ပုဂံကြား ရေလမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း၊ ရေအနက်တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေ လမ်းအသုံးပြုသူများအတွက် အ ချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဘေးကင်းသည့် ရေလမ်းများသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ရေလမ်းကောင်းမွန်ရေးအင်ဂျင်နီ ယာလုပ်ငန်းများအတွက် ရေလမ်း အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ပေး ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဦးသန့်စင်မောင်က “ကမ္ဘာ့ ဘဏ်ကနေ ချေးငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ဖြင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်း ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၂၀ ပြည့် နှစ်အထိ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ စီမံကိန်း မှာပါဝင်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေကြောင်း သွားလာမှုမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအ တွက် ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်း များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ တယ်။ ဒီစီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲနှင့်ပတ် သက်ပြီး ကနဦးအဆင့်တွင် ရေ ကြောင်းတိုင်းတာရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ယခု ကဲ့သို့ ရေကြောင်းတိုင်းတာရေးအ မြန်ရေယာဉ်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ရေအရင်း အမြစ်နှင့်မြစ် ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာန(ရန်ကုန်နောက်ချန်ရုံး)၊ ဆိပ် ခံတံတားတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တိုင်းတာရေးအမြန်ရေယာဉ်သစ် များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအ နား၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရေကြောင်းတိုင်းတာရေးအ မြန်ရေယာဉ်များသည် အမြန်နှုန်း မြင့်မားသည့်အတွက် ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ရှည်လျားသည့် မန္တလေး- ညောင်ဦးမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် တွင် လမ်းညွှန်ပြသထားသော ရေ လမ်းပြအမှတ်အသားများကို စစ် ဆေးနိုင်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါ က ကပ်ငြိ နေသည့်အမှိုက်များကို ဖယ်ရှား ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ကယ် ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ် ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦး ထွန်းလွင်ဦးက ” အရင်ကဆိုရင် ဌာနကတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ဆီစားနှုန်း နည်းပါးပြီး အရွယ်အစားသေးငယ် တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရေယာဉ် မရှိတဲ့ အတွက် လှေတွေ၊ ရေယာဉ်ငယ် တွေ၊ စက်တပ်ရေယာဉ်တွေ ငှား ရမ်းအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ ယခု ရေ ကြောင်းတိုင်း တာရေး အမြန်ရေ ယာဉ်တွေ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာ အချိန်ကုန် သက်သာစေတဲ့အပြင် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လည်း သက် သာထိရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ပြောသည်။
အမြန်ရေယာဉ်သုံးစင်းဝယ်ယူ ရေးအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာတွင် Semas Myanmar Manufacturing Co., Lt မှ တင်ဒါအောင် မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမြန်ရေယာဉ် များ၏ အရွယ်အစားမှာ ရှစ်မီတာ _ ၂ ဒသမ ၃ မီတာရှိပြီး အင်ဂျင် ပါဝါမှာ မြင်းကောင်ရေ ၁၅၀ ရှိ သည့် အတွက် အမြန်ဆုံးအနေဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ၇၅ ကီလိုမီတာခန့် မောင်းနှင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Tags: DonateSpped Boat